Sida ay dhaqaatiirta Itoobiya uga baxsadeen dagaalkii Tigray | Berberanews.com
Home WARARKA Sida ay dhaqaatiirta Itoobiya uga baxsadeen dagaalkii Tigray
Itoobiya-(Berberanews)-Dhaqtar Itoobiyaan ah ayaa ka warramay dhacdadii naxdinta lahay ee sida bukaannada isbitaalka loogu guray cagaf cagaf iyo tareellayaal, iyo sida uu isugu qariyay geedaha, kaddib markii bishii la soo dhaafay uu dagaal ka qarxay gobolka Tigray.
Dr Tewedros Tefera ayaa ka qaxay deegaanka beeraha qaniga ku ah ee Humera markii dambena wuxuu ka qaxay magaalada u dhow ee Adebay, isagoo BBC-da u sheegay inay halis noqotay ku noolaanshaha labada magaalo.
Sheekada Dr Tewedros:
Waxaa socotay duqeyn xooggan. Waxaa lagu beegsaday qeyb walba oo ka tirsan Humera – goobaha suuqyada, meelaha kaniisadaha iyo masaajidda iyo xitaa agagaarka isbitaalka.
Maalintii ugu horreysay waxaan xusuustaa in naloo keenay 15 meydadka rayidka iyo 75 dhaawac ah. Duqeyntu waxay socotay ilaa galabtii.
Magaalada waxaa laga soo duqeeyay dhanka bari, oo ay Xoogagga Difaaca Qaranka ee Itoobiya (ENDF) ku sugnaayeen, dhanka waqooyina Eritrea ayaa ka soo duqeysay. Xadka Humera ee Eritrea wuxuu keliya u jiraa 200m [ilaa 650ft] sidaas darteed duqeyntu waxay sidoo kale ka imaaneysay Eritrea.
Maalintii xigtay waxay bilaabay aroortii balse waxay joogsatay abbaarihii 11:00. Waxaa naloo keenay siddeed meydad ah, iyo dad kale oo dhaawacan. Waxaan kaddib go`aansannay inaysan halkaasi ammaan inoo ahayn bukaannadeenna iyo annagaba.
Waxaan go`aansannay inaan uska tagno. Waxaan dhaawaceenna ku qaadannay gaari cagaf cagaf ah waxaana aadnay Adebay, oo ilaa 30km [18 meyl] u jira Humera. Halkaasi duqeyn kama socon laakiin dagaalku wuu socday.
Waxaan sii wadnay daweynta dhaawacyada annagoo ku sugan xarunta caafimaadka ee Adebay. Shacab badan ayaa ka imaanayay Humera.
Maalintii koowaad waxaan ka daweyneynay dhaawacyadii ka soo gaaray duqeynta, balse markii ciidamada Itoobiya ay yimaadeen Humera, shacabku waxay imaanayeen iyagoo ay ka muuqdaan calaamado ulo ah iyo dhaawacyo culus oo ka weyn kuwa ay sababto toorreyda.
Waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada gaarka ah ee Amhara ee dowladda taabacsanaa, oo wata dharka ciidanka iyo “fanos”, oo ah maleeshiyaad aan dhar ciidan wadan ayaa yimid Humera.
Qeybo kala duwan oo ku yaalla galbeedka Tigray, arrimahan soo socda ayaa ka dhacay:
Magaalada Adebay, muddo labo maalmood ah ayaan dhaawaca ku daweyneynay. Dagaalka ayaa kaddib sii xoogeystay, wuxuu xitaa usoo dhowaaday xarunta caafimaadka.
Ciidamada Itoobiya, oo lagu arkayay waddooyinka Humera, iyagoo magaalooyinka imaanaya kaddib markii ay duqeymo geysteen
Waxaan go`aansannay inaan bukaannadeenna ku qaadno gaari xamuul ah oo aan geyno qeybaha kale ee Tigray, ee ay weli nabad ka jirtay, halka annaguna aan annagoo lugeyneyna ku cararnay geedaha oo ilaa 250m inoo jirayy.
Labo maalmood ayaan halkaas isku qarineynay. Maalintii saddexaad waxaan go`aansannay inaysan ammaan inoo ahayn sababtoo ah dad badan ayaa la dilayay, rabshad badan ayaa ka socotay Adebay. Waxaan maqli karnay dhawaqa rasaasta, mararka qaarna shanqarta dagaal culus.
Sidaas darteed waxaan go`aansannay inaan lug ku tagno magaalada xadka Sudan ku taalla ee Hamdayet, oo ilaa 50km u jirta halkaan ku sugneyn. Maleeshiyaadka ayaa na soo daba galay, iyagoo soo jiiraya keymaha una soo gudbaya dhanka Webiga Tekeze.
Hadda waxaan ku suganahay xero qaxooti, waxaan daweynayaa bukaannada. Waxaan arkay bukaanno ka socda qeybo kala duwan oo Tigray ku yaalla – oo xitaa fogaan ahaan xadka u jira 300km. Dadku way soo lugeeyeen, waxay soo arkeen rayid badan oo waddada ku dhintay.
Waxaan arkay bukaanno sheegay inay ciidamada Eritrea ku arkeen Tigray kuwaasoo geystay tacaddiyo, iyagoo guryaha gubaya isla markaana baabi`inaya dhul-beereedyo.
Dhammaan arrimahan waxay dhaceen xilli mugdi ah, internet-ka waa la damiyay, bankiyadana waa la xiray. Cidna ma oga waxa xaqiiqdii ka dhacayay gudaha Tigray.
Waxaan ka hadlay runta, oo ku saleysan wixii aan arkay oo aan maqlay. Waxaan rajeynayaa inay dadku soo diri doonaan guddi madax bannaan oo baaritaan sameeya.
Previous articleWarbixin gabadh ku shaqaysata xirfadda laydhka
Next articleMarkabka Nukliyeerka Israel ee ku sii jeeda Iran